#Madagascar : Lozam-piarakodia nandritra ny faran’ny herinandro : olona telo naratra mafy, iray tapa-tongotra | ONG Lalana Blog
#Madagascar : Lozam-piarakodia nandritra ny faran’ny herinandro : olona telo naratra mafy, iray tapa-tongotra
Tandrevaka ! Nahazo vahana ny lozam-piarakodia nandritra ny faran’ny herinandro teo. Olona telo naratra mafy, ny iray tapa-tongotra. Io no vokatry ny lozam-piarakodia nitranga teny Maibahoaka Ivato, omaly maraina tamin’ny 7 ora sy 30 mn. Fiara 4×4 Toyota iray no tafasitrika tany ambany kamiaobe iray rehefa avy nandona taxi-be sy mpandeha môtô. Fiarabe nitondra voatabia koa no nivadika teny Ambatomirahavavy…
Potika ny voatabia ! Izany no niafaran’ilay fiarabe nitondra voatabia nivadika teny Ambatomirahavavy, ny asabotsy maraina tamin’ny 2 ora. Avy naka voatabia tany Analavory ilay fiarabe no sendra nivadika tampoka noho ny torimaso araka ny filazan’ny lehilahy iray tao anaty fiara. Ny mpamily sy lehilahy iray hafa no tao anaty fiara. Nivadibadika ny fiara ary saika potika avokoa ny ankamaroan’ireo voatabia tanaty kesika. Tsy nisy kosa ny aina nafoy. Potika tanteraka ilay fiara.
Miteny ho azy ny sary ! Olona roa no indray naratra tao anatin’ity fiara 4×4 Toyota ity, omaly maraina tamin’ny 7 ora sy 30 mn teny Maibahoaka Ivato. Voalazan’ny zandary nanao ny fanadihadiana fa nikasoka tamina taxi-be ary nifandona tamin’ny môtô iray vao tafatsofoka tany ambany kamiaobe iray nipetraka teo amoron-dalana ity fiara 4×4 ity. Nilaza kosa ny olona nahita ny fitrangan’ny loza teny an-toerana fa nirimorimo nandeha mafy ilay môtô ka niala izany ny mpamily, saingy tsy tafala intsony ka namantana tany ambany kamiaobe avy hatrany. Olona iray no tapa-tongotra. Potika tsy nisy noraisina ny lohan’ilay fiara tsy mataho-dalana. Mitohy ny fanadihadiana.
Nangonin’i Jean Claude sy Hervé Chris